Sharci cusub oo ku saabsan waxyaalaha taariikhiga ah - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Sharci cusub oo ku saabsan waxyaalaha taariikhiga ah
La daabacay tisdag 16 juli 2013 kl 10.35
Waxaa lagu talajiraa in sharci cusub oo dhaqangelaya 1da Jannaayo lagu caddeeyo waxyaalaha qadiimiga ah oo loo aqoonsanayo taariikhi. Waxaa sanooyin badan la burburinaayey waxyaalo qadiim ah oo ay dad badani u arkaan in ay taariikhi u baahan in la dhawro. Taasna waxaa sabab u ahaa in sharciyan ay dadku siyaabo kala duwan u fasirayeen waxyaalaha taariikhiga ah.
Waxyaalahaas taariikhiga oo ka haray jiilashii waayadii hore waxaa badanaaba la helayey marka la dhisayo guryo ama waddo cusub la jeexayo. Kolkaas shirkaddii wax dhiseysey ayaa bixineysa kharashka lagu baarayo waxyaalaha taariikhiga ah oo goobta laga helay. Kadibna shirkadda dhismaha ayaa go’aan ka gaareysa in la sii wado dhisiddaas iyo in kale. Baaritaanka kadib hay’adda gobolka ayaa go’aamisa haddii la kaydinayo ama la burburinayo oo sidaas diiwaanka lagu gelinayo.
Hadba sida loo qiimeynayo waa kala duwanaan karaan. Laakiin sharcigaan cusub oo dhaqangelaya sannadka cusub waxaa lagu xafidayaa wayaalaha taariikhiga ah oo dambeeyey sannadkii 1850, halka hadda laga kaydiyo waxyaalihii ka horreeyey xilligaas.